Nagarik Shukrabar - ‘कोही सुध्रन सक्दैनन् भने साफ पार्छु’
शुक्रबार, ०५ कार्तिक २०७८, ०६ : ११
आइतबार, ०९ बैशाख २०७५, १२ : ४० | केपी ढुंगाना
तस्बिर: केशव थोकर
सत्ताधारी दल एमाले र माओवादी केन्द्रको रस्साकस्सीबीच नेपाल प्रहरीको २६ औं प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त सर्वेन्द्र खनाल संगठनका सदस्यलाई निर्देशन दिन व्यस्त छन् अहिले । २८ वर्षीय प्रहरी सेवामा ‘दवंग प्रहरी’ को छवि बनाएका उनको कार्यकालको प्रारम्भ डिआइजी रमेश खरेलको राजीनामासँगै प्रारम्भ भयो । खरेलको राजीनामा सामान्य भने पनि उनले दुखेको चित्त भने लुकाउन सकेनन् शुक्रवारसँग । सत्ताधारी दलका नेताको आकांक्षा, प्रहरी संगठनको सुदृढीकरण र संघीय संरचनाको कार्यान्वयनको जोखिम बोकेर आइजिपीको कुर्सीमा पुगेका उनको आइजिपीको एक साताको अनुभव, लक्ष्य र योजनाबारे शुक्रवारकर्मी केपी ढुंगानाले गरेको अन्तरंग कुराकानी ।
पक्कापक्की भन्दा पनि सरकारले गर्ने निर्णयमा म धेरै आशावादी थिएँ । सरकारबाट जे निर्णय आउँछ, त्यो स्विकार्ने मनस्थितिमा भएकाले तनाव लिनुपर्ने केही थिएन ।
तपाईं नै हो, तपाईंको विकल्प छैन भन्ने खालका आश्वासन त आइरह्यो नै होला । सामान्य रुपमा यस्तो फोन कल आउँछन् नै । सरकारले निर्णय गर्यो भनेर औपचारिक जानकारी कसले दियो भन्न खोजेको नि ?
नियमित काम गरेर बसेको थिएँ । त्यस्तो प्रेसर बढेको थिएन भन्नु भए पनि आफ्नो वृत्ति विकासबारे निर्णय हुँदै गर्दा प्रेसर हुनु मानवीय स्वभावै हो । सरकारले निर्णय गर्यो भन्ने सुनेपछि कत्तिको रिल्याक्स अनुभव भयो ?
२८ वर्षीय यात्राको दौरानमा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी महानिरीक्षकसम्म हुँदा धेरै पदको दज्र्यानीचिह्न पाइसक्नुभयो । दज्र्यानी चिह्न लगाउँदा धेरैको रमाइलो क्षण चैँ पहिलो नै हुने अनुभव सुनिन्छ । तपाईंको हकमा इन्स्पेक्टरको दज्र्यानी चिह्न लगाउँदाको क्षण रमाइलो कि आइजिपीको ?
विल्कुल भिन्न हुनेरहेछ । निर्णय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पद भएकाले कामको प्रकृति र चाप छुट्टै हुने नै भयो । सरकारसँग समन्वय गरेर जिम्मेवारीपूर्ण रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्यो । हाम्रो जस्तो संरचनामा रहेर काम गर्दा कमान्डरको भूमिका अहं नै हुन्छ ।
हिजो ‘सर्वेन्द्र खनाल हुँदैहुन्न’ भन्नेहरु युटर्न भएर अहिले ‘उनीबाहेक अर्को विकल्प नै थिएन’ भनिरहेको अनुभव त गर्नुभयो होला नि ?
यो बाहिरबाट हेर्दा सर्लक्क देखिने विषय हो । संगठन बाहिरकाले मेरै सामु आएर कसैले नभनेकाले अहिले उनीहरुको व्यवहार कस्तो छ, त्यसबारे मैले धेरै अनुभव गर्न पाइनँ । संगठनभित्र केही नोटिस भएको छ । व्यक्तिअनुसार च्वाइस फरक हुनसक्छ तर सरकारको निर्णय आइसकेपछिको अवस्थामा व्यक्तिभन्दा संस्थागत स्वार्थ महत्वपूर्ण हुन्छ । अब पनि फलानालाई आइजिपी बनाउँछु भन्दै कोही हिँड्छ भने ऊ तत्काल सुध्रनुपर्छ, नत्र उसैलाई हानि हुन्छ ।
ती कुनै पनि रहन्नन् । संगठन प्रमुखले चाहेका, नीतिगत काम हुने हो । म त यसको, म त उसको भन्ने व्यक्तिका लागि कुनै गुन्जायस हुन्न । संगठनले तोकेको काम गर्नुपर्यो, जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्यो यत्ति हो ।
कल्पनै नगरे हुन्छ । एआइजीलाई हल्लाउने आइजिपीले हो । पद अनुसारको जिम्मेवारी वहन गर्नुप¥यो । मेरो कार्यकालमा संगठन प्रमुखलाई कसैले हल्लाउने कल्पना नगरे हुन्छ । त्यो हुन्न ।
उहाँ राम्रो साथी हो । संगठनमा पहिला पनि हरेक दर्जामा राम्रो काम गर्दै जानुपर्छ भन्ने नै हो । अब उहाँको पनि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र चाहना होला । त्यतातर्फ त्यत्ति गइनँ म । चित्त नबुझेमा पेन्सन पाकिसकेकाले राजीनामा दिनु पनि सामान्य नै हो ।
नढाँटी भन्दा खल्लो पनि लागेन । बसेर काम गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । आखिर बनाउने त संगठन नै हो । नागरिककै सेवा गर्ने हो । हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने त लागिहाल्छ तर म यही बन्छु र हुन्छु भनेर म कहिल्यै हिँडिनँ । सरकारले चयन गर्यो । अब यसमा उहाँ (रमेश खरेल) ले किन राजीनामा दिनुभयो, उहाँको केही अप्सन छ कि त्यो थाहा भएन ।
एकातिर सुरक्षा संगठनमा न चाहेर प्रवेश हुन्छ न चाहेर छाड्न सकिन्छ भन्ने सुनिन्छ । अर्कोतिर राजीनामा दिन पाएको हुन्न, स्विकृति हुन्छ । विरोधाभाष भएन र ?
बहानाबाजी चल्दैन भनेको हो । यो भएन, त्यो भएन भन्ने वातावरण हटाउने मेरो जिम्मेवारी हो । तोकिएको जिम्मेवारी बहानाबाजी नगरी पूरा गर्नु संगठनका सदस्यको जिम्मेवारी हो । सर यस्तो भएन, उस्तो भएन भन्नेका लागि स्थान रहन्न । कठोरताका साथ जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्छ ।
ल शुभकामना ।